सरकारले डा. केसीको ज्यान लिन खाेजेको भन्दै समर्थकहरूले गरे यस्तो अपिल, देशभर आन्दोलन चर्काउने तयारी — Sanchar Kendra
सरकारले डा. केसीको ज्यान लिन खाेजेको भन्दै समर्थकहरूले गरे यस्तो अपिल, देशभर आन्दोलन चर्काउने तयारी
काठमाडौं । सरकारले अनशनरत डाक्टर गोबिन्द केसीको ज्यान लिने नियत राखेको आरोप लागेको छ । केसी पक्षधरहरुले सरकारले वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर केसीको ज्यान लिने नियत राखेको आरोप लगाएका छन्। सरकारी नियतका बिरुद्ध केसी पक्षले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्न आम नागरिकलाई आब्हानसमेत गरेको छ ।
सुक्रबार भएको सरकार र डा. केसी पक्षबीचको वार्तामा सरकारी पक्षले कुनै सहमति गर्ने नियत नराखेको भन्दै केसी पक्षधरले आन्दोलन जारी घोषणा गरेको हो । वार्तामा सहभागी केसी पक्षधरले सरकार प्रक्रियागत कुरामा पछि हटेकाले सहमति नभएको आरोप लगाएको छ ।
वार्तामा बस्नुअघि अनौपचारिक छलफलबाट बनेको समझदारीको मस्यौदामा सरकारी टोलीले हेरफेर गरेको कारण सुक्रवारको वार्ता सफल नभएको केसी पक्षका वार्ता टोली संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले आरोप लगाएका छन् ।
डा. क्षेत्रीले शनिवार एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कुराको जानकारी गराएका छन् । उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘असोज २३ गते दिनभर सरकारी पक्षले आलटाल गरेर वार्तामा ढिलाइ गर्यो । साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा सरकारी पक्ष २२ गते बनेको मस्यौदामा गम्भीर हेरफेरसहितको नयाँ मस्यौदा लिएर प्रस्तुत भयो । यसबाट राजनीतिक नेतृत्वको गैरजिम्मेवारी र संवेदनहीनता मात्र नभई बेइमानी र वार्ता प्रक्रियालाई अनिश्चितकालसम्म लम्ब्याएर डा केसीको ज्यानै लिने नियतसमेत उदांगो भयो ।’
त्यसका लागि दबाब दिन देशभर प्रदर्शनका कार्यक्रम सुचारु गर्न तथा काठमाडौंमा आज मध्यान्ह १२ बजे प्रदर्शनका लागि माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुन डा. क्षेत्रीले सबै नागरिकलाई अपिल गरेका छन् । ‘सत्याग्रहीको ज्यानै लिने सरकारको हिंस्रक चरित्रविरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपालमा लोकतन्त्रको मर्म बचाउन राजनीतिक दलहरुलाई समेत अपिल गर्दर्छौं,’ केसीको तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक डा. क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
सरकार मेडिकल माफियाहरुको योजनामा चलेको र त्यसै अनुसार स्वास्थ क्षेत्रमा गतिबिधि भइरहेको लगायतका बिषय उठाएर पटक पटक अनशन बसेका डाक्टर गोबिन्द केसी पछिल्लो पटक पनि अनशन बसेका छन् । कोरोना महामारीकाबीच पनि कठोर सत्याग्रहमा रहेका केसीको पक्षमा देशभर आम नागरिकले विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम गरेपछि सरकार केसीसँग वार्ता गर्न तयार भएको थियो ।